7 ka mid ah khaladaadka ugu badan ee WhatsApp iyo xalkooda | Wararka Gadget
7 ka mid ah khaladaadka ugu badan ee WhatsApp iyo xalkooda
WhatsApp Maanta waa barnaamijka ugu isticmaalka badan ee fariimaha deg dega ah ee adduunka oo dhan, in kastoo qaar kale sida Telegram ama Line ay si isa soo taraysa u ciyaarayaan door hoggaamineed, in kasta oo aan loo dhowaanin tirada isticmaaleyaasha ay maamusho adeegga ay leedahay Facebook. Nasiib darro WhatsApp wali waa codsi ina siinaya dhibaatooyin iyo madax xanuun, kuwaas oo maanta aan isku dayeyno inaan xallino.
Dhibaatooyinka ugu badan ee aan kula kulanno WhatsApp waa wax iska caadi ah oo intooda badani ay leeyihiin xal fudud oo fudud. Maqaalkan ayaan ku tusaynaa 7 ka mid ah khaladaadka ugu badan ee WhatsApp iyo xalkooda, si haddii aad nasiib u yeelato inaad ku xanuunsatid mid ama in ka badan oo iyaga ka mid ah, aad si dhakhso leh u xallin kartid oo aanad adkayn noloshaada oo aad u badan.
1 Ma rakibi karo WhatsApp
2 Xidhiidhkaygu kuma muuqdo WhatsApp
3 Fiidiyowyada waxaa lagu soo dejiyaa iyaga kaligood kadib xogta sicirkayaga
4 Ma maqli karo qoraalada codka
5 Waan sugaa oo sugaa laakiin waligey mahelo nambarka waxqabadka
6 Ma arko xiriirka ugu dambeeya ee xiriir
7 Wicitaanada codka waa tayo aad u liidata
Ma rakibi karo WhatsApp
Dhammaan ama ku dhowaad qof kasta oo haysta taleefannada casriga ahi wuxuu rabaa inuu rakibo WhatsApp isla marka ay daaraan si ay ula xiriiri karaan qoyskooda ama asxaabtooda. Nasiib darrose, qof kastaa kuma rakibi karo barnaamijka farriinta deg-degga ah farriintooda, in kasta oo ay sababo dhowr ah u sabab noqon karto.
Midka hore wuxuu noqon karaa inaad xoogaa haysatid dhibaato xagga lambarka taleefankaaga, in uusan si fiican u shaqeynaynin ama sidii saxda ahayd. Ta labaad waxay noqon kartaa sababtoo ah waxaad la kulantay mamnuucid, taas oo ay sababi karto sababo kala duwan awgood, wayna sahlanaan kartaa ama dhib tahay in laga baxo-
Haddii aadan ku jirin labada xaaladood ee aan sharaxnay, waxaa suurtogal ah in aadan rakibi karin WhatsApp maxaa yeelay nooca software-ka ee qalabkaaga moobiilku lama jaanqaadi karo adeegga. Tusaale ahaan Haddii aad isticmaasho taleefan casri ah oo wata Android 2.2 ama ka hooseeya nidaamka qalliinka, ha isku dayin maadaama aadan awoodin inaad rakibto, iyadoo loo marayo hab caadi ah si kasta oo aad isugu daydo.
Xidhiidhkaygu kuma muuqdo WhatsApp
Tani waxay noqon kartaa qaladka ugu caansan ee ku dhowaad dhammaan adeegsadayaashu ay ku soo dhibtoodeen waqti ka mid ah WhatsApp. Waana in qofna uusan xor u ahayn marka aan rakibeyno arjiga, waxaan isku dayeynaa inaan marinno xiriiradayaga oo aysan jirin, iyadoon loo eegin inta jeer ee aan cusbooneysiinno. Tani waxay u sabab noqon kartaa ka rarida xiriiradaada koontadaada Google ama sababtoo ah hal xiriir oo keli ah kuma kaydsamaan kaarkaaga SIM-ga ama taleefankaaga casriga ah.
Haddii aad xiriiriyahaagu ku keydsan tahay koontadaada Google, waa inaad si sax ah u waafajisaa, si ay hadhow ugu soo baxaan WhatsApp. Tag Settings, ka dibna Akoonnada iyo ugu dambeyn Google si aad u kiciso iswaafajinta oo aad ula socoto muuqaalka dhammaan xiriiradaada.
Haddii ay dhacdo inaadan haysan nuqul nuqul xiriiradaada ah, ama Google ama haddii kale, waa inaad ku soo kabsato gacanta, si ay hadhow uga muuqdaan WhatsApp.
Fiidiyowyada waxaa lagu soo dejiyaa iyaga kaligood kadib xogta sicirkayaga
Qofna kama baxo guriga isagoon agabkiisa gacanta ku qaadan jeebkiisa ama boorsadiisa, waxayna noqdeen qayb muhiim u ah nolosheena, ugu badnaan inta xogta aan helno. Xog la'aan la'aan suurtagal maahan in lala tashado shabakadaha bulshada, ama lagu maareeyo WhatsApp xawaare gaar ah.
Mid ka mid ah khaladaadka, ama halkii mid ka mid ah dhibaatooyinka aan ka heli karno WhatsApp, waa tan si toos ah u soo dejinta fiidiyowyada ama sawirrada, taas oo horseedda isticmaalka xogta, mararka qaarkood aan loo baahnayn. Taasina waa qofka aan lahayn saaxiibka caadiga ah, ama ku dhex jira kooxda weyn, taas oo ay si joogto ah noogu soo diraan fiidiyowyo iyo sawirro wax kasta oo iyaga ku dhaca maalintii oo dhan.
Si looga hortago fiidiyowyada ama sawirrada si otomaatig ah looma soo dejisan karo, waa inaad ku beddelataa goobaha WhatsApp, oo u beddelo si ay u soo dejistaan ​​oo keliya marka aan ku xirno shabakad WiFi ah. Maskaxda ku hay in shirkado badan oo taleefannada gacanta ahi ay lacag ka qaadaan xogta xad-dhaafka ah, sidaa darteed waa inaanu daryeelo ugu badan kuwa ay noo fidiyaan oo ah qiimaha asalka ah ee sicirkeenna.
Ma maqli karo qoraalada codka
Waxaan dhamaanteen dirnaa oo aan helnaa xusuus-qorrada cod maalinle ah cidina shaki ugama jiro sida loo sameeyo. Waxa aan dad badani ogayn ayaa ah in WhatsApp ay adeegsato dareemaha dhawaanshaha ee qalabkaaga mobilada si loo yareeyo mugga codka marka ay ogaato jirka agtiisa ah. Taas macnaheedu waxa weeye markasta oo aad terminal-kaaga dhegtaada u dhigto si aad si fiican u maqasho qoraalka xusuusta, gabi ahaanba waxba kama maqashid.
Si loo xaliyo dhibaatadan, waa inaad isku daydaa inaadan moobiilkaaga casriga ah u keenin dhegtaada ama qayb kale oo jirkaaga ka mid ah, ama aad isticmaasho dhagaha dhageysiga taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhageysato qoraallada codka adiga oo aan wax dhibaato ah qabin iyo wixii ka sarreeya oo aad ka ilaaliso asturnaantaada qof kale.
Haddii aysan jirin wado aad ku maqli karto qoraalada codka, maskaxda ku hay in qofka ku hadla qalabkaaga mobilada uu fashilmi karo sidaa darteed ma lihid xulasho aan ka aheyn inaad u qaadatid adeegga farsamada qaladkaasna shaqo kuma lahan. leh WhatsApp.
Waan sugaa oo sugaa laakiin waligey mahelo nambarka waxqabadka
Si aad u bilawdo adeegsiga WhatsApp, waa lagama maarmaan inaad ku shaqeyso koontadaada adigoo adeegsanaya SMS. Adeegga farriinta degdegga ah laftiisu wuxuu ogaadaa farriinta qoraalka la helay oo xitaa uma baahnid inaanu fureyno farriimaha inta badan. Intaas waxaa sii dheer, in muddo ah waxaan sidoo kale awoodnay inaan dhaqaajino akoonkeena adoo helaya wicitaan, taas oo ay ku siin doonaan koodhkeena.
Mararka qaar SMS-ka oo wata lambarka shaqaalaynta ma imanayo iyadoo aan loo eegin inta aan sugeyno, in kasta oo aan had iyo jeer ku yeelan doonno hawlgelinta cod wicitaan, taas oo aan kalsooni badan siinayn isticmaaleyaal badan inkasta oo ay gebi ahaanba ammaan tahay. Haddii ay tani tahay kiiskaaga, hubi inaad haysato kaar SIM ah oo lagugu dhejiyay boosteejadaada oo kuu oggolaanaysa inaad hesho SMS-ka ama inaad si sax ah u dhigtay horgalaha waddankaaga si aad ugu dirto lambarka hawlgelinta.
Ma arko xiriirka ugu dambeeya ee xiriir
Khaladaadka kale ee ugu badan ee aan ka heli karno WhatsApp waa tan ma arko waqtiga xiriirka ugu dambeeya ee mid ka mid ah xiriiradayada, wax waxtar badan u leh dhammaan kuwa xanta ku abuuraya dabiiciyan. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaanan la kulmin qalad taasna waa in adeegga farriinta degdegga ah ay noo oggolaatay inaan wax ka beddelno asturnaanta waqti dheer oo aan ilaalino waqtigeenna xiriirka ugu dambeeya.
Laga soo bilaabo Dejinta iyo helitaanka Koontada waxaan ka dooran karnaa haddii aan dooneyno ama aan rabin inaan muujinno taariikhda iyo waqtiga xiriirkeenna ugu dambeeya. Dabcan, maskaxda ku hay in haddii aynaan oggolaan in xiriirkeenna ugu dambeeya la muujiyo, ma arki doonno tan xiriiradayada sidoo kale.
Haddii aadan arkin waqtiga ugu dambeeya ee xiriiriyahaaga, ha ka welwelin, ma aha qalad WhatsApp ah, laakiin waxaad curyaamisay suurtagalnimada inaad soo bandhigto taariikhda iyo waqtiga xiriirki kuugu dambeeyay. Adiga oo si fudud u dhaqaajinaya, waxaad awoodi doontaa inaad aragto oo aad xan ku sheegto goorta ay dadka aad xiriirka la leedahay xiriirkoodii ugu dambeeyay la xiriireen, laakiin had iyo jeer maskaxda ku hay inay iyaguna awoodi doonaan inay arkaan adiga oo aan xaddidneyn.
Wicitaanada codka waa tayo aad u liidata
WhatsApp waxay siisaa dhammaan isticmaaleyaasha suurtagalnimada in la sameeyo wicitaanno cod ah, kuwaas oo lagu sameeyo iyadoo la adeegsanayo sicirka xogta ama isku xirka WiFi. Haddii aad dareento in wicitaanada aad sameyso ama aad hesho ay yihiin kuwo aad u liita, waxaa badanaa sabab u ah khadka internetka oo liita ama liita.
Si loo saxo qaladkan, kaliya waa inaad raadisaa xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya shabakadaha shabakadaha. Haddii aad rabto wicitaannada codka si ay u yeeshaan tayada ugu fiican, waa inaad isku daydaa inaad ku xirnaato shabakad WiFi ah mar walba maxaa yeelay haddii kale waxa ugu caadiga ah waa inay leeyihiin tayo aad u hooseeya. Haddii aadan marin u lahayn shabakad WiFi ah, waa inaad ugu yaraan isku daydaa inaad ku xirnaato shabakad 4G ah, in kasta oo maskaxda lagu hayo in isticmaalka xogta wicitaannada noocan ah ay caadi ahaan aad u sarreeyaan.
Maqaalkan waxaan ku eegnay qaar ka mid ah khaladaadka ugu caansan ee WhatsApp, soo jeedinta xalalka, waliba aad u badan. Haddii aad aragto qalad aan ku jirin liiskan, waxaad aadi kartaa bogga caawinta ee arjiga farriinta lagu marin karo boggiisa rasmiga ah.
Intaas waxaa sii dheer iyo ilaa iyo inta aynaan la kulmin qalad masiibo ama aad horey u ogayd inaysan xal u helin, waad nala tashan kartaa waxaanan isku dayi doonaa inaan kaa caawinno sida ugu macquulsan.
Ma ku guuleysatay inaad xalliso qaladkii WhatsApp kugu soo laabtay mahadsanid qodobkan?. Noo sheeg booska loogu talagalay faallooyinka qoraalkan ama mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee aan ku sugan nahay, diyaarna u nahay inaan gacan kaa siiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » 7 ka mid ah khaladaadka ugu badan ee WhatsApp iyo xalkooda
Si loo xaliyo dhibaatooyinka ugu badan ee whatsapp waxaan u adeegsadaa barnaamijkan aan ku tusayo; https://play.google.com/store/apps/details?id=faq.whatsapphelp&hl=es
aniga ahaan waa wax aad u faa'iido badan oo si sahlan loo isticmaali karo, waan ku talinayaa.
Jawaab Sonia Cedenilla Pablos
Tani waa sida aquarium-ka loo yaqaan 'robot aquarium' u eg yahay HEXBUG AQUABOT jellyfish
Had iyo jeer On of the Galaxy Note 7 wuxuu u furan yahay dhammaan codsiyada